Sawiradii u dambeeyay saldhiga milatari ee Shiinuhu ka samaystey Jabuuti – Xeernews24
Sawiradii u dambeeyay saldhiga milatari ee Shiinuhu ka samaystey Jabuuti
Sawiradii u dambeeyay saldhiga milatari ee Shiinuhu ka samaystey dalak Jabuuti. Shiinaha ayaa ah dawladii afraad ee saldhig milatari ka samaysata jamhuuriyadda Jabuuti oo ay ka soo galaan lacago farabadan inkastoo hadana aan la arag lacagtaas halka ay marto baahi iyo saboolnimo badna laga arko nolosha ummadda jabuuti.
Shiinaha ayaa billaabay dhismaha saldhigan sanadkii la soo dhaafay. Shiinaha ayaa sheegay in saldhigaas uu gacan ka gaysan doono nabad ilaalinta iyo gargaarka banii’aadannimo ee Afrika iyo Galbeedka Aasiya.
Waxaa kale oo saldhigaas loo adeegsan doonaa is kaashi milatari, dhoolatuska ciidamma badda iyo hawlaha samato bixinta, sida ay ku warrantay Xinhua oo ah wakaaladda wararka ee Shiinaha.
Waa markii ugu horreysay oo Shiinuhu uu saldhig milatari ka sameysto dibadaha.
Inkastoo jabuuti uu yahay dal yar , waxaa haddana saldhig milatari kol hore ku lahaa Maraykanka, Japan iyo Faransiiska.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/08/shii-4.jpg 430 696 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-08-03 10:14:072017-08-03 10:14:07Sawiradii u dambeeyay saldhiga milatari ee Shiinuhu ka samaystey Jabuuti
SAWIRRO: Meydadka Askartii Amisom Looga laayay Sh/Hoose oo Uganda la geeyay... Ninkii Sheegan Jiray Mayeerka Saylac oo Galab dheer Saylac ka Caraabay